admin, Author at Amaphupho Nezincazelo
Noma ngabe uyasikholwa noma awusikholwa isigameko esise ncadini encwele phakathi kuka Samsoni no Delile kodwa lokhu khona kwezinwele kuyiqiniso. Phela kulesisigameko uSamsoni walala kwase kuthi intokazi ewu Delile yamgunda izinywele aphela amandla akhe. Lesisigameko ngisiletha lapha hhayi ngoba ngilikholwa kodwa ngifuna ngithi uma ngichaza ngezinwele nawe usheshe ucacelwe. Amaphupho Ngezinwele Asho Ukuthini? Ukuphupha izinwele akuyona … Read more
Categories Ukuphupha Leave a comment
Ukuphupha Umthakathi Okubalulekile ngaleliphupho wukuthi umthakathi umbone kanjani ukuthi wumthakathi. Kuyenzeka ke iphupho lingakucacisi okuningi kodwa inqondo ngoba isuke ingalele izibonele yona. Kwesinye isikhathi ibona ngaphandle kwezimpawu ezithile. Ukuphupha Umthakathi Ngokucacile Wonke umuntu ophilayo unayo imicabango ngokuthi umthakathi ungambona kanjani ebusuku. Okwakujwayelekile kwakuwukuthi ubathakathi bagibela izimfene. Abamanje akusekho konke lokho. Kuchazani Ukuphupha Umthakathi? Uma umbonile … Read more
Amaphupho Abika Isitha Nawa Baningi ababuza ngamaphupho abika isitha ngokuhlukana kwamo. Isitha sivela ngezindlela eziningi emaphusheni. ukuphupha ugwazwa ukuphupha udutshulwa ukuphupha usendlini eshayo ukuphupha uhamba odakeni ukuphupha ucwile emanzini angcolile ukuphupha lina imvula enezikhukhula ezinkulu ukuphupha umshado ukuphupha isdumbu noma amangcwaba ukuphupha ufake izingubo ezimnyama ukuphupha ulahlekelwe iring yomshado ukuphupha useskhathini ukuphupha ubelethe ingane encane … Read more
Ukuphupha Imoto Ishayisile Kuchazani? Imoto ayisho isifo ngaso sonke isikhathi uma uyiphupha, ngaphandle uma inombala oluhlaza satshani (green). Eminye imibala yemoto ephusheni inezincazelo ezahlukene. Sizamile ukuyichaza imibala ehlukene phansi kwesihloko esithi ukuphupha imoto. Ukuphupha Imoto Ishayisile Uma uphupha imoto ongayazi ishayisile lokhu kuchaza ukuthi kungabakhona umuntu oseduze nawe owonakelelwa ziyinto zakhe empilweni. Lapha ngisho uma … Read more
Ukuphupha Imoto Kusho Ukuthini? Kudumile kwabaningi ukuthi uma uphupha imoto lokho kusuke kusho isifo. Cha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kunezimo ezithile ezehlukile ongaphupha imoto kuzo. Okubalulekile ngokuphupha imoto kuba yizinto ezimbili: Kuba umbala wemoto Kube yisimo sakho mayelana naleyo moto Lokhu ngeke kukholakale kodwa kuyiqiniso: uyakwazi ukuzijwayeza ukuzibona wena nokwenzayo uma uphupha. Lokhu kubalulekile uma … Read more
Ukuphupha Umuntu Egqoke Izingubo Ezimnyama
Sonke siyazi ukuthi ngookwesiko lesintu izingubo ezimnyama zisho ukuzila ngokwesintu. Kodwa ke akuyiso sonke isikhathi la khona izingubo ezimnyama zibika isifo. Ukuphupha Umuntu Egqoke Izingubo Ezimnyama Engihlale ngikugcizelela njalo uma iphupho lakho linomunye umuntu phakathi wukubheka ukuthi lowomuntu ubani. Futhi kufanele ubheke ukuthi nihlobene noma ubudlelwane benu bumi kanjani. Uma ngabe uphupha umuntu omaziyo futhi … Read more
Zingane zakwethu zikhona izinto zokuphushwa kodwa ukuphupha umuntu enqunu yinto engafanele ukuthu ijwayele ukwenzeka kuwe. Lokhu sikushiswo wukuthi leliphupho likhomba isimo esingalungile kahle empilweni yakho noma kulowo osuke umbona ephusheni. Okusangozana ngaleliphupho wukuthi lo omphupha enqunu kunokwenzeka ukuthi nguwena qobo lwakho kodwa iphupho likufihlile. Abaningi baye becabange ukuthi lokhu kusho umthakathi. Cha lutho bashaye phansi. … Read more
Ukuphupha Ugwazwa Kusho Ukuthini
Ukuphupha Ugwazwa Kusho Ukuthini? La inkinga ekhona enkulu naleliphupho yikho ukuthi linesikhali phakathi ngakho alilihle nhlobo. Noma yisiphi isikhali akufanele usiphuphe uma ulele ngisho ngabe asisetshenziswa kuwe. Lokhu kucishe kufane nokuphupha udutshulwa noma umehluko umnane nje kodwa ngizokuchazela. Amaphupho Ngokugwazwa Kuyenzeka uma uphupha ugwazwa umuntu omaziyo noma ongamaziyo isikhali asiphethe ungasiboni. Sizoqala ngokuphupha ugwazwa usibone … Read more